သင်ယူလေ့လာ ရရှိထားသည်များကို နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အသုံးချရန် သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်း - Yangon Media Group
သင်ယူလေ့လာ ရရှိထားသည်များကို နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အသုံးချရန် သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်း
သင်ယူလေ့လာ ရရှိထားသည့် ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတို့ကို နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အသုံးချရန် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဇွန် ၁၈ ရက်က မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မြစ်သားမြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုကောင်း ကျိုးဆောင်ပါတီ၏ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ၎င်းင်းက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူရဦးရွှေမန်းက ”မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှု ရေး လက်ရှိအခြေအနေနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် မိမိတို့နိုင်ငံ အခြေအ နေတို့ကို ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လိုသည့် စိတ်စေတနာဖြင့် ပါတီတည်ထောင်ခြင်းဖြစ် ပါကြောင်း၊ လူတိုင်းသည် နိုင်ငံကိုချစ်သည်၊ တိုးတက်စေချင်သည်ဟု နားလည်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဒေသတိုးတက်အောင်၊ မိမိတို့ နိုင်ငံတိုးတက်အောင် တစ်ဦးချင်းဆောင်ရွက်သည်ထက် စိတ်စေတနာခံယူချက် တူညီသူများစုစည်းပြီး ပါတီတည်ထောင် ဆောင်ရွက်ပါက တစ်မျိုးသားလုံးအတွက်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် နိုင်ငံ့ရေးရာ၊ ပြည်သူ့ရေးရာကိစ္စရပ်အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲစွမ်းဆောင် အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေအရလည်း ပါတီအနေဖြင့်သာ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် ပါတီတည် ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် နယ်ပယ်စုံ၊ ကဏ္ဍစုံမှစိတ်စေတနာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိကြသည့် နားလည်နှံ့စပ်သူများပါဝင်ကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည် စိတ်စေတနာကောင်းမွန်ကြသော်လည်းရှိ ထားသည့် ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံလိုအပ်ချက်ရှိသဖြင့် မျှော်မှန်းရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း အ ကောင်အထည်မဖော် နိုင်ကြပါ ကြောင်း၊ မိမိတို့သင်ယူ လေ့လာရရှိထားသည့်ပညာ၊ ဥစ္စာ၊ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတို့ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုရန်နှင့်အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ့အတွက်၊ ပြည်သူ့အတွက် ထိ ရောက်စွာ အကျိုးပြုနိုင်လျှင် ပိုမို ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ စိတ်စေတနာအတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်း မည်မျှရှိသည်ဖြစ်စေ ပြည်သူများက တာဝန်အပ်နှင်းမှသာ စီမံ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်၍ ပြည်သူများ၏ ထောက်ခံအာပေးမှု၊ ပူး ပေါင်းပါဝင်မှုသည် အဓိကကျပါ ကြောင်း” စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်ဟုပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီက သတင်းထုတ် ပြန်သည်။
သန်းနှင့်ချီသော တရားမဝင် နယ်မြေရွှေ့ပြောင်းလာသူများကို စတင် ဖယ်ရှားတော့မည်ဟု ထရန့် ပြော
ဦးဝီရသူ အရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရထံ အမြဲမပြတ် သတင်းပို့နေဟုဆို
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုမှ အောင်ဝင်းဇော်အား ကားဖြင့် လိုက်ပို့သူ အောင်ဝင်းထွန်းကို အာမခံပေး
မိုးဦးကာလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း သုံးကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်၊ တစ်ကြိမ??
မကွေး-တောင်တွင်း မီးရထား စတင်ပြေးဆွဲစဉ်က ခရီးသည်များပြားခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ခရီးသည် လိုက်ပ??
”တစ်လကို သီချင်း လေးပုဒ်လောက်တော့ ပုံမှန်ရေး ဖြစ်ပါတယ်” ဖိုးကာ